दिमागमा धेरै कुराहरू खेलेर तनावमा हुनुन्छ ? दिमागी सन्तुलनका लागी यसाे गर्नुहाेस - ज्ञानविज्ञान
टाउको गह्रौ भएजस्तो, भारी भएजस्तो, तातो भएजस्तो महसुस हुन्छ ।
हामीले यहाँ दिमागलाइ कसरी सन्तुलनमा राख्ने भन्नेबारे एक भिडियाे युट्युव च्यानल SAKARATMAK SOCH बाट साभार गरेका छाै । भिडियाे हेर्नुहाेस :
Don't Miss it कस्ताे दुखाइलाइ पिरियडिक माइग्रेन भनिन्छ ? याे कति प्रकारका हुन्छन् ?
Up Next यदि स्लिम बन्न मन छ भने पुदिनाको चिया पिउनुहोस्